Trump oo dalbaday lacago malayiin ah si loogu dhiso darbiyada xaduudaha oo Congress-ka dibug u soo celinayeen – Walaal24 Newss
December 28, 2018	2	By walaal24
Xiritaankii dawladda Maraykanku waxay ahayd mid si ballaaran loo filayay sii wadaan ka dib markii ay Congress-ka dib u soo celinayeen Khamiistii, iyada oo xildhibaannada ay kala qaybinayaan madaxweynaha
Donald Trump ayaa dalbaday $ 5 bilyan oo doollar (3.9 bilyan oo doolar) maalgelinta canshuuraha ee loogu talagalay derbiyada xuduudaha Mexico.
Golaha Guurtida iyo Golaha Wakiilada ayaa la kulmay 4-da subaxnimo. EST (2100 GMT) maalinta lixaad ee xidhitaanka oo dib u bilawday doodaha siyaabaha loo dhammeeyo. Taasi waxay ku jiri doontaa tixgelinta Senate-ka ee tallaabo horey u ansaxisay Golaha Jamhuuriga ah ee ku-meel-gaadhka ah ee la kulmay baahida maal-galinta derbiga ee Trump.
Sharcigaas oo loogu talagalay inuu ku sii socdo Senatarka 100-kursi, wuxuu u baahan doonaa 60 cod. Jamhuuriyeyaashu waxay leeyihiin 51 kursi, sidaas darteed waxay u baahan doonaan inay isku dayaan inay qanciyaan qaar ka mid ah Demoqraadiyada inay dib u soo celiyaan qiyaasta.
Laakiin Dimuqraadiyadu waxay intooda badan diidaan derbiga la soo jeediyay ee Trump, kaas oo markii hore uu sheegay in ay maal-galin doonto Mexico. Waxay taageero u fidiyeen $ 1.3 bilyan oo kamid ah maaliyadda guud ee xuduudaha. Ma aysan caddeyn haddii qaar ka mid ah heshiisyadu ay ku dhufan lahaayeen dalabkaas iyo baahida Trump.
Mick Mulwaney, oo ah madaxa fulinta Aqalka Cad, ayaa sheegay in Aqalka Cad uu ka soo horjeeday Dimoqraadiyada dhinaca ammaanka xuduudaha. Warbaahinta ayaa sheegtay in Madaxweyne Ku-xigeen Mike Pence uu soo jeediyay $ 2.1 bilyan oo maaliyad ah.
Toddobaadkii la soo dhaafay Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay xidhitaan dheer.
Laba toddobaad oo wadahadal ah oo u dhaxeeyay Trump iyo hoggaamiyeyaasha shirarka, qaybo ka mid ah dawladda Maraykanka ayaa xidhay Sabtidii, taas oo saameeysay 800,000 oo shaqaale ah oo ka tirsan Waaxda Guryaha Nabadgalyada, Cadaaladda, Beeraha, Ganacsiga iyo hay’adaha kale.
Kompany oo ka hadlay cunsuriyad lagula kacay laba Cayaartooy oo ka cayaara England iyo Italy
Maalmulka Galmudug oo sheegay iney gacanta ku soo dhigeen dadkii ka Dambeyay dilkii ka dhacay Magalada dhuusamareeb
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka oo ka hadlay dajinta ajandayaasha kulamada soo socda
Kim ayaa diyaar u ah inuu la hadlo Trump laakiin wuxuu sheegay inuusan tijaabin dulqaadka Waqooyiga Kuuriya
Masaajidada ku yaalo Dalka Mareykanka oo Amnigooda aad loo adkeeyay iyada oo ay jirto……..
Madaxweyne Trump oo dacwad ku furey maamulka gobolka California ee dalka Mareykanaka
IMF oo bogaadisay koboca dhaqaale ee Dowlada Federaalka ay ka sameysay Soomaaliya
Muran u dhaxeyso laba Dowladood oo ku saabsan Qashin sababtayna in lakala qaato Safaaradaha
Daawo: Mustafe Cagjar oo amar ku siiyay booliska inaysan u dul qaadan cid kasta oo carqaladeynayso ammaanka
Daawo: Culimada Gobolka Minnesota ee Mareykanka ayaa bayaan ka soo saaray mowduuca Bisha Ramadan bilowga khilaaf ka dhax dhashay umada Musliminta gaar ahan Soomalida
Daawo: Madaxweynaha DDSI ayaa casumaad ugu sameeyay Aqalka Madaxtooyada Jigjig Odayaasha Dhaqanka bilihii ku dagaalamay degaanka Dhumey ee G.Sool